Sidee lagu ogaadaa in lamaanahaagu ku jecel yahay - Talo ku saabsan Ragga Naagta Casriga ah | Ragga Stylish
Alicia tomero | 23/07/2021 20:14 | Lamaanaha iyo Galmada
Xiriirro badan maraan go aano go aan, Iyo inkasta oo laba qof horeyba loo qaabeeyey lammaane ahaan, haddana weli waxaa jira shaki ku saabsan in lammaanahaagu ku jecel yahay iyo in kale. Hubsiimo la'aantu waxay imaan kartaa markii la isku dhejiyo laba qof. Waqtigu wuu dhaafi karaa midkoodna sii wax ka badan intaad hesho.
Waxaan had iyo jeer dooneynaa ixtiraam aan shuruud lahayn iyo jacayl, haddii aan la muujin oo xiriirku uusan hoosta ka xariiqin horay u socoshada, laga yaabee inay ka fiican tahay in la bixiyo qodobka ugu dambeeya. Laakiin miyaan khaldami karnaa? Ma sheegi kartaa haddii wehelkaagu runti ina jecel yahay? Hagaag jawaabtu waa haa, waxaa jira faahfaahino dhowr ah oo noo cadeyn kara dhammaan qodobadaas hubin la'aanta ah, iyo inaan ku tusin doono xiga.
1 Furayaasha lagu ogaanayo haddii lammaanahaagu ku jecel yahay
1.1 Wuxuu ku tusayaa jacaylkiisa maalin kasta mana doonayo inuu ku beddelo
1.2 Waxay kaa dhigeysaa inaad dareento mid qaas ah oo ku dhageysanaya
1.3 Way ku ixtiraamtaa, way ku ilaalinaysaa waxna uma dhimeyso sharaftaada
1.4 Ka fikir mashaariic badan adiga iyo mustaqbalka
1.5 Wuu ku taageeraa, wuu ku caawiyaa oo kalsooni buu ku qabaa
1.6 Isagaa kugu daraya qorshayaashiisa oo dhan
Furayaasha lagu ogaanayo haddii lammaanahaagu ku jecel yahay
Ogaanshaha haddii qofku runti ku jecel yahay waa arrin lagu falanqeynayo qaar ka mid ah calaamadaha inuu maalin walba ku tuso. Shaki la'aan "ficilku wuxuu u qalmaa kun eray" lammaanahaaguna waa inuu daboolaa qaar badan oo ka mid ah qodobadan aan hoos ku tilmaameyno
Wuxuu ku tusayaa jacaylkiisa maalin kasta mana doonayo inuu ku beddelo
Qofka ku jecel, u baahan doonaa inuu ku garab joogo maalin kasta. Intaas waxaa sii dheer, kaliya kuuma sheegayo inuu ku jecel yahay, laakiin wuxuu ku tusayaa maalin walba isagoo doonaya inuu ku ag joogo iyo inuu ku daryeelo. Jacaylka waxaa lagu muujiyaa ficil ee aan lagu muujin ereyo, Wuxuu sidoo kale ku aqbalaa sida aad tahay mana ku qasbi doono wax kasta oo xiriirka ah in wax laga beddelo habka aad tahay.
Waxay kaa dhigeysaa inaad dareento mid qaas ah oo ku dhageysanaya
Qofkaas oo adiga ku jecel oo dareemaya soo jiidasho gaar ah ixtiraam iyo xushmad badan muujiyaan. Waxaad ogaan doontaa inuu awood u leeyahay inuu kaa dhigo mid dareen gaar ah leh, inuu hayo faahfaahin ku saabsan sida inuu gacanta kugu qabto, inuu kuu furo albaabka gaariga iyo inuu si dhaw ugu fiirsado inuu ku dhageysto. Haddii uu bixiyo dulsaar badan, wuxuu ku lug yeelan doonaa wadahadalkaaga, Wuu ku weydiin doonaa oo wuxuu ku siin doonaa talada ugu fiican. Faahfaahinta kale waxay tahay inuu si daacad ah indhahaaga kaa fiirin doono oo uu madaxa kaqarin doono marka aad hadlaysid, maxaa yeelay weli wuu xiiseynayaa mana doonayo inuu lumiyo xadka wadahadalkaaga.
Way ku ixtiraamtaa, way ku ilaalinaysaa waxna uma dhimeyso sharaftaada
Waxaa jira seddex fikradood oo isbarbar socda, qofka ku difaacaa wuxuu noqon doonaa qof Isagu ma doonayo in dhibaatooyin lagugu cusleeyo ama aanad rafaadsan. Ixtiraamku waa mid kale oo ka mid ah qiyamka ay tahay in qof walbo ilaaliyo, xiriirna waa qayb muhiim ah.
Haddii lammaanahaagu runtii ku jecel yahay waa inuu si kasta kuu ixtiraamo: aragtidaada, ra'yigaaga iyo qof ahaan. Qodobkani waa mid muhiim u ah isku xidhka sharaftaada ha dhaawicin. Haddii uu jiro kala duwanaan xagga fikradaha ah, waa in la ixtiraamo iyo isagu ma aha inuu kugu bahdilo go'aamadaada qof hortiisa, haddii uu sameeyo, waa sababta oo ah isagu dhab ahaan kuma jecli adiga.
Ka fikir mashaariic badan adiga iyo mustaqbalka
Haddii uu aad kuu jecel yahay, kugu dari doona dhamaan qorshayaashiisa iyo mashaariicdiisa mustaqbalka. Waa in la ogaadaa in go'aan kasta lagu qaadanayo madaxbannaanida buuxda, laakiin haddii aad sidoo kale rabto inaad ka qaybgeliso lammaanahaaga qorshayaashaada, waxay noqon doontaa inaad sawir muuqaal ah oo adiga iyo labadiinaba ah. Mashaariicdaada dhexdooda, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku wada noolaato isla saqafka hoostiisa, aad sameyso qorshe wadajir ah ama xitaa aad carruur dhasho.
Wuu ku taageeraa, wuu ku caawiyaa oo kalsooni buu ku qabaa
Taageerada ayaa ah waxa ugu qurux badan xiriirkaWaxaa laga yaabaa inay si joogto ah u yiraahdaan waan na jecel nahay, laakiin haddii aysan u muujin taageero iyo caawimaad nooma jecla jacayl weyn. Lammaanaha ku wada nool hal saqaf, ama carruur isu leh, waxay ogaan karaan faahfaahintaan markay isku halleeyaan shaqada guriga iyo dhibaatooyinka.
Ama xitaa markay da 'yar yihiin oo ay samaynayaan go'aanno muhiim ah oo culus, qofka kale waxaa lagu muujiyey kalsooni weyn iyo xiiso. Aaminaadku waa mid kale oo ka mid ah rugta dharka lagu iibiyo, haddii tayadaasi aysan jirin xiriir ayaa naga lumay maxaa yeelay waligeed miro dhal ma aha wuxuu noqdaa sun. Amni darrada iyo wax is daba marinta ayaa isla socda oo aan la aaminin qofka aad la joogto ama aad u aragto inaysan jeclayn nooca cilaaqaadka aad la leedahay saaxiibtinimada, waxay kuu horseedaa inaadan aasaas wanaagsan ku yeelan xiriirkaaga.
Isagaa kugu daraya qorshayaashiisa oo dhan
Sidee ayaan mar hore dib ugu eegnay qof si dhab ah kuu jecel ayaa doonaya inuu ku garab joogo markastaIn kasta oo ay tahay inaadan u oggolaan inuu noqdo ku xirnaan joogto ah. Laakiin haddii aan ku jirno bilowga xiriirka waxaan arki karnaa inuu hagaajinayo nidaamkiisa oo uu naftiisa u oggolaanayo samee qorsheyaal badan adigana aad kujirto howlahooda.
Xorriyaddu waa mid kale oo ka mid ah buttresses-ka, mar haddii ay tahay mid ka mid ah tiirarka ay tahay in lagu dhiso xiriir isla markaana haddii la ilaaliyay bilowgii ilaa maanta, ay ku leedahay qiimayaal aad u wanaagsan labada dhinacba. Qofku waa inuu si xor ah u koro iyo in lamaanahaagu uusan u baahnayn inuu carqaladeeyo. Waa sida kaliya ee aysan u jirin wada hadal waxyeello leh iyo in qofku uu leeyahay xorriyadda guud ee uu ku noqon karo qofkuu doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo ogaado in lammaanahaagu ku jecel yahay